Manamboatra mpamokatra Gear | Teknolojia avo lenta sy avo lenta - Hery mandrakizay
Home / Fitaovana / Mandrosoa Gear
Ny spur gears no fitaovana mahazatra indrindra hita maso izay mampita fihetsiketsehana eo anelanelan'ny vatan-kazo roa mifanila. Noho ny endrik'izy ireo dia sokajiana ho karazana varingarina silindrana izy ireo. Satria ny faritry ny nify amin'ny nify dia mifanitsy amin'ny famaky amin'ireo vatan-kazo nitaingina azy, tsy misy hery manosika azo avy amin'ny làlan'ny axial. Ary koa, noho ny fahamoran'ny famokarana, ireo fitaovana ireo dia azo atao tsara. Etsy an-danin'izany, ny spur gears dia manana fatiantoka satria mora mitabataba izy ireo. Amin'ny ankapobeny, rehefa misy fitaovam-pandrehitra roa ao anaty harato, ny fitaovana miaraka amin'ny nify betsaka dia antsoina hoe "gear" ary ilay manana nify kely kokoa dia antsoina hoe "pinion".
Amin'ny maha iray amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy fitaovam-piadiana matihanina indrindra ao Shina, dia miarahaba anao fatratra izahay hividy na hividianana fitaovam-pamokarana ambongadiny vita avy any Shina eto amin'ny orinasanay.
Haneho izay 4 valiny